IHE ND WH MMADES KWES --ROL --LỌ - Mgbasa ahịa N'ogbe maka Mmanụ Dị Mkpa | AromaEasy
Kacha nta Order ibu:
Ego pere mpe n'ahịa zuru ezu bụ $ 500.00 (USD). Ngwaahịa niile & ịnye ọnụahịa nwere ike ịgbanwe na nnweta oge.
Anyị na-anabata kaadị akwụmụgwọ niile (AMEX, M / C, Visa, Discover), T / T. A ga-anakọta ụgwọ niile n'oge nzụta.
Na-ere ihe anyị:
A gaghị ere ma ọ bụ kpọsaa ngwaahịa niile na weebụsaịtị ọ bụla na-erughị ọnụahịa edepụtara na weebụsaịtị anyị. A ghaghị ire ngwaahịa na ụlọ ahịa na MSRP. Ego maka ire ere n'okpuru mkpọsa na-ekwe naanị ma ọ bụrụ na ngwaahịa ahụ ka gafee oge-oge. Enweghị ike ịreghachi mmanụ ndị dị mkpa na ndị ọzọ na-ere ahịa maka ebumnuche mkpọsa & enweghị ike ree ya n'ịntanetị ma ọ bụ na-echere ụlọ ahịa na ahịa ma ọ bụ nwepu ego.
Anyị na-eme ike anyị niile ịbupu ihe n'ime ụbọchị azụmahịa 5 & n'ihi oge mgbanwe ọsọ ọsọ a, windo maka ịkagbu iwu dị mkpụmkpụ. Ọ bụrụ na a rịọrọ arịrịọ ịkagbu gị tupu anyị emee iwu gị, anyị nwere obi ụtọ ịkagbu iwu gị maka nkwụghachi zuru ezu, mana ozugbo iwu ahụ dị na usoro, anyị enweghị ike ịkwụsị ya.
N'ihi nhazi oge & nnweta nnweta, anyị enweghị ike ịsọpụrụ arịrịọ mgbanwe na iwu mgbe ịzụrụ. Biko dị njikere iji nlezianya nyochaa iwu gị tupu ị nyefee ya.
Adreesị Mbupu Ọtụtụ:
Naanị anyị na-ebuga adreesị mbupu enyere & enweghị ike izipu n'ọtụtụ adreesị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ebubata iwu gị na adreesị dị iche iche, biko tinye otu iwu maka adreesị ụgbọ mmiri ọ bụla.
Nlaghachi / mgbanwe:
IWU NILE KWESOLROL KWES FRIN INBINGH F ANDB ANDGH AND ANDB ANDR AND NA-enweghị ike ịlaghachi ma ọ bụ gbanwee.
Ọ bụrụ na eweghachite ngwungwu n'ihi na adreesị enyere anyị ezighi ezi, anyị abụghị maka ịbupu ọzọ. Anyị ga-akpọtụrụ onye zụrụ ahịa maka adreesị ziri ezi; Mbupu & njikwa ebubo ga-akwụ ụgwọ ọzọ tupu anyị enwee ike izipu ngwugwu ahụ ọzọ.
Echefuola / Mebiri site na Post Office:
Ọ bụrụ na enwetabeghị ngwungwu gị n'ime izu 3 nke ịnata ozi izipu ozi mbubata gị (izu 6 maka iwu mba ụwa), biko kpọtụrụ anyị.
Ihe mebiri emebi / Usoro Njehie:
Ọ bụ ezie na a na-enyocha ngwaahịa ọ bụla maka mmesi obi ike dị mma tupu ebupu ya, ọ ga-ekwe omume ịnweta ihe mebiri emebi. Na mgbakwunye, n'ihi njehie mmadụ, enwere ike imehie ihe. Maka ebumnuche ndị a, ọ dị mkpa imepe & inyocha ihe gị ozugbo ị natara ha.
Biko gwa anyị n’ime ụbọchị azụmahịa ise nke ịnata ngwungwu gị ma ọ bụrụ na ọ nwere ihe dị njọ na iwu gị. Anyị enweghị ike ịsọpụrụ mgbanwe na mpụga oge, dị ka ekwuru n'ime amụma anyị.
Ihe Ndị Mebiri emebi:
Ozugbo emere ka amara gị ọkwa banyere ihe ọ bụla mebiri emebi ị natara, anyị ga-esoro gị rụzie ha. Biko rịba ama: anyị enweghị ike ịgbatị ego ọ bụla maka gị ma ọ bụrụ na ị kpebie ire ihe mebiri emebi na mbelata.
N'oge ụfọdụ, anyị ga-akwalite ihe maka pasent ma ọ bụ belata ọnụego mbufe nye ndị ahịa anyị na-ere ahịa. Onyinye ndị a anaghị etinye aka na iwu ahịa. Koodu dere maka onyinye a enweghị ike iji ndị ahịa na-ere ahịa.
Imebi nke ọ bụla N'ogbe N'uba amụma ga-eme na akaụntụ nchupu.
Enwere m ọtụtụ ebe maka ụlọ ahịa m mana mana m mepụtara naanị otu akaụntụ na ntanetị; kedu ka m ga esi esi nye iwu niile mgbe m choro ka ebuga ha n’ebe di iche?
Enwere m ike iji foto gị nyere aka kwalite ngwaahịa ndị ahụ site na mgbasa ozi mmekọrịta m / n'ịntanetị?
Kpamkpam! Naanị anyị na-arịọ gị ka ị ghara ịgbanwe foto ahụ n'ụzọ ọ bụla & biko jikọta ha na ntanetị mgbasa ozi anyị.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ gbasara usoro ịzụ ahịa anyị na atumatu anyị, biko kpọtụrụ anyị.
Enwere m ike ịregharị PuffCuff na Ahịa Amazon?
Ee, ị nwere ike. A gaghị ere ma ọ bụ kpọsaa ngwaahịa niile na Amazon.com maka ihe na-erughị ọnụahịa edepụtara na weebụsaịtị anyị.
You na-enye mbupu mba ofesi?
Eeh, anyị na-ebuputa iwu mba ụwa niile site na DHL ma ọ bụ FedEx priorit Mail Mail International. Mbupu mba ụwa ga-ekpochapụ kọstọm na mba ha na-aga. Ndị ahịa mba ụwa na-ahụ maka ọrụ ọ bụla na ụtụ isi, ụtụ isi na ụgwọ azụmaahịa nke ngwugwu ha nwere ike ibute. Agaghị etinye ego ndị a na ụgwọ mbupu / njikwa anyị. Biko kwe ka oge nnyefe izu ise na asaa. Maka ọtụtụ nnukwu ahịa, ọnụọgụ ụbọchị ole nwere ike ịdị iche na-adabere na mbido na ọdịnala oge.
Enwere m ike ịnyegharị AromaEasy iji ree na saịtị m ma ọ bụ na ụlọ ahịa m?
Mana ọ kwesịrị ịnakwere anyị
Enwere m ike ịmegharị PuffCuff ka ị ree na saịtị m ma ọ bụ na ụlọ ahịa m?
You na-ewere COD?
MBA. Anyị nwere ọtụtụ nhọrọ ịkwụ ụgwọ tinyere ikike iji ọtụtụ kredit na debit akwụ ụgwọ mana anyị anaghị enye nhọrọ maka COD
Gịnị bụ gị akwụkwọ ikike maka okpukpo diffuser?
1 afọ akwụkwọ ikike, otu afọ ogologo karịa ndị ọzọ!
FREE Sample maka Wholesaler:
Anyị naanị otu oge free samples na-arịọ kwa ụlọ ọrụ.
N'omume na-ejedebe na otu kwa mmanụ
Ihe nlele bụ n'efu. Anyị nwere ike izitere gị ya mana ị na-ahụ maka mbupu FedEx.
Offọdụ mmanụ anyị dị oke ọnụ dị ka Rose na ọtụtụ ndị ọzọ ga-enwe obere ụgwọ
Onye ahia ọ bụla nwere oke iji nweta 6 n'efu nke mmanụ dị mkpa.
Ọ bụla ahịa na-ejedebeghị iji nweta 1 free sample nke diffuser.
Olee otú Label Label mkpa mmanụ Ọrụ?
Anyị nwere ike ịmepụta na bipụta kpọọ maka gị maka a otu oge ego ma ọ bụ i nwere ike inye anyị gị kpọọ na nkwakọ ihe.
Anyị na-emezi karama, okpu, akara, ma tinye usoro gị wee zigara gị ya ma ọ bụ ebe ị họọrọ.
Anyị nwere ike ijikwa ma obere iwu (ihe dịka karama 100) na nnukwu iwu (karịa 10,000).
Enweghị usoro iwu chọrọ, AromaEasy bụ otu n'ime ihe nkesa dị mkpa maka ndị na-ere mmanụ na-achọghị iwu kacha nta. Ọbụlagodi na ị bụ onye ọchụnta ego azụmaahịa ma ọ bụ otu onye na-eme ọrụ na-ebupụta azụmahịa nke gị, anyị nwere obi ụtọ ịnye ndụmọdụ njiri mara nke ahaziri iche iji nyere gị aka ịmalite. Nwere ike ịdabere na enyemaka anyị iji chọpụta mmanụ dị mkpa ma ọ bụ ngwakọta ga-egbo mkpa ndị ahịa gị.
Ọ dị mfe! Naanị jụọ n'okpuru ma ị ga-enweta ozi ahụ ozugbo.
Enwere ego ntọala otu oge nke 200 USD maka imepụta akara, dabere na nha usoro gị. Enweghị ụgwọ iji bipụta mgbe ego mbido otu oge malitere.
Katalọgụ Download: pịa ebe a
Mepụta akaụntụ efu
GabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiNụrụ Island na McDonald IslandsHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle nke MmadụIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJerseyJọdanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorth MacedoniaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalestian TerritoryPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé na PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Kitts na NevisSaint LuciaSaint Martin (Dutch akụkụ)Saint Martin (French akụkụ)Saint Pierre and MiquelonSaint Vincent na GrenadinesSamoaSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia / Sanwichi IslandsSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard na Jan MayenSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad na TobagoTunisiatoro toroTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited Alaeze (UK)United States (US)United States (US) Minor dịpụrụ adịpụ IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVaticanVenezuelaVietnamVirgin Islands (British)Virgin Islands (US)Wallis and FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe